izikebhe Inflatable ukudoba kukhona ukukhanya ngokwanele ukuze ukwazi ukuthwala futhi icwecwe, it is kakhulu baziswa yizivakashi. Kulokhu, bona amelana amanzi futhi ngokuphelele ephephile ukuyisebenzisa. Ukuze womshini evame ukusetshenziswa PVC noma hipalon (zokwenziwa iraba).
Isikebhe ukudoba of hipalona vystelit ngaphakathi ezimbili zamatshe Neoprene, futhi phakathi kwawo ngoba amandla kuvuleke Indwangu ungqimba. amathayi Artificial - material okuhlala kakhulu emelanayo amathonya kwemvelo, ngokuhle ungangenisi amanzi properties. Ngakho ngomkhumbi ngokudoba kusukela hipalona - ukukhetha okuhle kulabo bathanda ukungcebeleka ngomfula, ukudoba ebusuku nokuhamba.
Ukubhukuda izindawo PVC futhi ibelula futhi iqine, okulula ukuyiphatha futhi izothatha wena isikhathi eside. Kodwa-ke has nezihibe, ezifana lo yinkimbinkimbi ukulungisa.
Indlela ukunquma izinga izikebhe inflatable?
Ingxenye isakhiwo hipalona ngokuvamile uxhumeke nge glue, okuyinto eduze indlela yokwakheka impahla esikebheni - ezinkulu, kwakheka ngenxa ye kunenze nisondelane, ngezinye izikhathi ngisho namandla kunomFilisti izikebhe kakhulu, zingabantu air-Friend futhi ayikwazi ukusulwa nge sikhathi.
Ubuhlobo obuseduze amakhamera hipalona - inqubo eside futhi kukhathaza, ngakho-ke lokhu isikebhe ukudoba akuyona ezishibhile. Kodwa kulokhu intengo ngokugcwele quality kuyavumelana. Hipalon esetshenziswa ukwenziwa Achilles futhi Arancia izikebhe.
Uma ukhetha isikebhe ukudoba PVC, ke ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze indlela izingxenye yokuxhuma, njengoba le nto kabi eziboshiwe. Sutures wenza PVC lalungiselela kunenze nisondelane baprofetha noma ngesidunu ezizibeni kuyendlulela ngaphakathi nangaphandle i-amandla enkulu. Futhi ngenxa compounds zezitho lwaleli esetshenziswa iqine noma Welding. Zokushisela - it is a indlela enokwethenjelwa, kodwa kunzima ukusebenzisa ngokuphakeme ezimbonini.
Isikebhe sokudoba PVC ungaba tape oluhlabayo - ke wenza hhayi kuphela umsebenzi zokuhlobisa, kodwa futhi kuqinisa ngokuhlanganyela.
Hlobo luni isikebhe ukukhetha
Uma uhlela ukuba njalo ukusebenzisa ngomkhumbi ebelidoba uwedwa noma umgibeli oyedwa, khetha isikebhe somdlalo compact wenza PVC. imikhiqizo enjalo kuningi amafemu "frigate", "Poseidon", Kolibri, Marko Izikebhe.
Kuphinde futhi kube okuhle kakhulu kulabo abasebenza ukudoba bangaba izikebhe inflatable ngaphansi motor - ephephile futhi uzinzile, bona kuzokuvumela ukuhambisa ngokushesha emanzini ngaphandle kokuchitha ngesikhathi esifanayo fuel kakhulu (ku-isihlenga inflatable likhuliswe izinjini encane umthamo ezincane kuno isikebhe). izici Good baye ezinezinjini izikebhe inflatable amagxolo brand, Nordic, "Neptune".
inketho Okuningi nzima - isikebhe bedoba, elihlanganisa kalula izikebhe inflatable, kodwa has a phansi eqinile Ukunquma fin ukuze zazo unamathisele ingxenye inflatable isakhiwo.
Ukuze keel eqinile nakho ngeke kusize ezimbanjeni-izikebhe kungase kufakwe nenjini enamandla. Carry izikebhe anjalo trailer, ngakho-ke abakwazi ngokuthi icwecwe futhi kulula ukuyiphatha. Ezimbanjeni-isikebhe kungenziwa ifakwe amanzi jet ubuchwepheshe, eshaweni kanye uphethiloli. imikhiqizo ezinjalo ayatholakala emakhemisi kusukela Gladiator, Aquarius, "Impulse" futhi "Neptune" futhi "Mnev futhi K".
isihlenga Inflatable nge emphemeni esikhiphekayo kufanelekile amaholide umndeni noma kuhambeke inkampani enkulu, kodwa ngeke isetshenziselwe umsebenzi sína ngenxa phansi soft, okulula ukugoba. Lesi sikebhe kungenziwa wadonsa ukuze aqinise bebodwa, ngaphandle kosizo lwabangane babo, kulula ukuba babuthane, ezokuthutha kanye nokugcina.
Yini okufanele ibe induku ligcina uthi lokuphotha luzungeza
Lapho ukudoba best Februwari?
Indlela ukubamba Pike entwasahlobo: imihlahlandlela
Ukuphila Onegin edolobhaneni. Isici Evgeniya Onegina
Uma bebheka esikhathini esizayo - car electric "Tesla"
Uhlelo self-imfundo: siqu isu uthisha
Umshado kaKrypton - ungakanani? Iminyaka Engama-19 Yomshado
Amaqiniso ethakazelisayo Poland: umlando, nokuzwa kanye nokubuyekeza
Isobho ngomntwana unyaka: zokupheka. Indlela ukupheka isobho ingane
Indlela ukupheka yenkomo sikadali nemifino
Mir Inqaba e Belarus - samuntu umlando e itshe